आजको राशीफल: २०७६ श्रावण १३ गते | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सूर्य उदय बिहान ०५.२५ मिनेटमा, सूर्यअस्त साझ ०६.५४ मिनेट अस्त
मेष राशीका लागि आजको दिन शारीरिक कष्ट, चोटपटकको सम्भावना, अध्ययनमा सफलता प्राप्त भएता पनि आर्थिक कारोबारमा नोक्सान मिल्नेछ । आजको दिन तपाईले शुभ दिशा पूर्व, शुभ रंग सेतो, शुभ अंक ५ रहेको छ ।
बृष राशी भएका ब्यक्तिलाई आजको दिन अध्ययनमा सफलता, आर्थिक कारोबारमा सफलता मिल्नेछ भने दाजुभाई बिचमा सम्बन्ध बिग्रनेछ । आजको दिन शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रंग रातो, शुभ अंक रहेको छ ६ ।
आजको दिन मिथुन राशीका लागि दाजुभाई बिचमा सम्बन्धमा सुधार छ, साझेदारी कारोवार तपाईको लागि शुभ रहेको छ भने आर्थिक धन नोक्सान हुनेछ । शुभ दिशा रहेको छ पूर्व, शुभ रंग हरियो, शुभ अंक ३ रहेको छ ।
राशी कर्कट राशीका आजको दिन धन लाभ हुनेछ, राज्यपक्षवाट सफलता, दाजुभाई बिचमा सम्बन्धमा सुधार मिलेता पनि शारीरिक चोटपटकको सम्भावना बढेर गएको छ । आजको दिश शुभ दिशा उत्तर, शुभ रंग पहेलो, शुभ अंक ७ रहेको छ ।
राशी सिह राशीका आजको दिन शारीरीक सुख प्राप्त हुनुका साथैं पारीवारीक सम्बन्धमा सुधार मिल्नुका साथैं अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ भने आर्थिक कारोवारमा हानी । आजको दिन शुभ दिशा पूर्व शुभ अंक रंग सेतो, शुभ अंक ५ रहेको छ ।
कन्या राशीको लागि आजको दिन शारीरिक सुख उमङ्गता पैदा भएता पनि अध्ययनमा सफलता मिल्नेछैंन, आर्थिक हानी हुनेछ, आजको दिन शुभ दिशा पूर्व शुभ रंग हरीयो शुभ अंक ६ रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस काठमाडौंमा एक डिग्री हुँदा जुम्ला माइनस ६.५ तापक्रम, चिसो अझै बढ्ने !
तुला राशीका लागि आजको दिन अध्ययनमा सफलता नैं मिल्नेछ भने आर्थिक कारोवारमा लाभ मिलेता पनि ब्यापार कारोबारमा हानी हुनेछ । आजको दिन शुभ दिशा रहेको छ उत्तर, शुभ रंग रहेको छ पहेलो, शुभ अंक रहेको छ ७ ।
बृश्चिक राशीका आजको दिन आर्थिक कारोवारमा सुधार रहनेछ भने, राज्यबाट सम्मान मिल्नेछ शारीरिक सुखमा कमि हुनेछ भने अध्ययनमा मन कम लाग्नेछ । आजको दिन शुभ दिशा रहेको छ उत्तर, शुभ रंग रहेको छ निलो, शुभ अंक रहेको छ ६ ।
धनु राशीका लागि आजको दिन अध्ययनमा सफलता नैं मिल्नेछ भने आर्थिक कारोबारमा सुधार मिल्नुका साथैं ब्यापार कारोवारमा लाभ नैं मिल्नेछ भने सञ्चित धन नोक्सान हुनेछ । आजको दिन शुभ दिशा रहेको छ पूर्व, शुभ रंग रहेको छ पहेलो शुभ अंक रहेको छ १ ।
मकर राशीका लागि आजको दिन सामाजिक कार्यमा मन लाग्नेछ, नया कार्यको आरम्भ हुनेछ भने अध्ययनमा अवरोध, धन हानी हुनेछ । आजको दिन शुभ दिशा रहेको छ पूर्व शुभ रंग रहेको छ रातो, शुभ अंक रहेको छ ५ ।
कुम्भ राशीका लागि आजको दिन अध्ययनमा सफलता नैं मिल्नेछ भने, नयां कार्यको आरम्भ समेत हुनेछ, आर्थिक लाभ हुनुका साथैं पारीवारीक सरसल्लाह अनुसार अघि बढेको खण्डमा सफलता प्राप्त नैं हुनेछ । आजको दिन शुभ दिशा रहेको छ पूर्व शुभ रंग रहेको छ रातो, शुभ अंक रहेको छ ५ ।
मीन राशीका लागि आजको दिन अध्ययनमा मन नलाग्ने, आर्थिक हानी हुनेछ, पेशा कारोवारमा हानी भएता पनि पारीवारीक सरसल्लाह अनुसार अघि बढदा सफल अवश्य भईएला । तपाईलाई शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रंग रातो, शुभ अंक रहेको छ ६ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज ६६ औं जन्मदिन, शुभकामना दिनेकाे लाइन !
बास्तुशास्त्र अनुसार घरमा मृत ब्यक्तिको तस्बिर फोटो कहा राख्ने यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी बास्तुशास्त्र अनुसार दिदैं छु ।
घरको मृत ब्यक्तिको तस्बिर कहा राख्ने ?
१. मृत ब्यक्तिको तस्बिर तपाईले घरको दक्षिण दिशाको भिक्तामा राख्दा उत्तम हुनेछ ।
२. यदि नमिलेको खण्डमा तपाईले पश्चिम भिक्तामा पनि राख्न सक्नुहुनेछ ।
३. तपाईले यदि दक्षिण वा पश्चिम भित्तामा नमिलेको खण्डमा नैऋत्य कोणमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ ।
४. मृत र जिउदो ब्यक्तिको तस्बिर तपाईले पश्चिम भिक्तामा राख्नु पर्दछ ।
जीउदो ब्यक्तिको तस्बिर तपाईले उत्तर दिशाको भिक्तामा राख्नु पर्दछ ।
तपाईले पूर्व तिरको भित्तामा पनि राख्न सक्नुहुनेछ ।
१३,श्रावण.२०७६,सोमबार ०६:३० मा प्रकाशित
← ५० वर्षमाथिका अविवाहित महिलालाई भत्ता
लागुऔषध कारोबारमा समातिन्छ भरिया मात्रै →